Sir James Paul McCartney MBE(*18. June 1942 Liverpool) bụBritishonye na-agụ egwú, onye na-agụ egwú na onye na-agụ egwú, onye bụbu onye òtùThe Beatles.
A mụrụ Paul McCartney 18. June 1942 na Liverpool, Walton Hospital. Nna ya, James McCartney, sitere na Ireland ma bụrụ onye Katọlik. Ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu na ndụ ya, ma a maara ya nke ọma dịka onye na-egwu egwú jazz. Jemes nwere nkpa jazz nke ya ma kpọọ ụda opi, piano, clarinet, na ngwá ọrụ ndị ọzọ.
Paul McCartney mụrụ nne na nna nke Irish okpu (James McCartney na Mary Patricia Mohinová). Ọnụ ya na nwanne ya Michael (n'okpuru pseudonym Mike McGear mere onwe ya na egwú ntochi otu The Scaffold) ha we me ka elu na Catholic okwukwe. Mama m nwụrụ nacancerara mgbe Paul 13 nọ ruo ọtụtụ afọ. N'oge ọ bụ nwata nna ya zụtara ya mbụguitarna ebe ọ bụ na ọ nọ na-akpọ ụda na piano na aka yajazzìgwè ahụ nyere Pọl ihe mbụ nke egwú n'onwe ya. Ọ ghọtara ụlọ akwụkwọ dị na Liverpool InstituteGeorge Harrisonna ọnụ ha malitere ịmụta guitar (n'ihi ọchịchọ ịmata - na Paul fọdụrụ n'aka guitar urụk agbatị na mirror ejide n'olu ndị na-abụghị n'akụkụ).
Akụkọ ihe mere emeThe Beatlesmalitere n'afọ1957, mgbe na njem uka naBekee WooltonPaul ama ọnọ enyeJohn Lennon, onye nakweere ya n'ime otuMmadụ iri anọdị ka onye guitarist. N'oge a, njikọ kachasị egwu nke oge niile -Lennon/ McCartney.LennonMcCartney wee malite imekọ ihe n'ịde abụ, na-ede ha maka afọ abụọ mbụ nke ide ihe banyere otu narị. Oge ntụrụndụ niile jikọtara ọnụ na egwuri egwu. Paul dị ezigbo mma n'ụlọ akwụkwọ, ọ na - ekwu ma German ma Spanish, ma ọ họọrọ music, ya mere, ebe mmụta ahụ malitere ịrụ ọrụ na ndị agha ahụBritainna kama ịga n'ihu na-amụ ihe, ọ malitere ịrụ ọrụ dịka onye inyeaka na-akwọ ụgbọ ala na locomotive na ịgbagharị waya na ụlọ ọrụ ahụ.
N'oge mgbụsị akwụkwọ nke afọ1958na otuMmadụ iri anọrenamed naJohnny na Moondogsna n'afọ1959akpọgharịrị ìgwè ahụ, oge a naIberibe Silver. N'afọ1960a kpọgharịrị ìgwè ahụ naThe Beatles(okwu mkpịsị aka -ebepụtaraebe,itipụtaratie, tie, tie ...) ma tinye aka naGermanHamburg. Ekele maka ọpụpụ nke guitarist mbụStuart SutcliffMcCartney weghaara ngwá ọrụ ya.
Paul nọ n'ìgwè ahụThe Beatleska ọ daa n'afọ1970. Mgbe onye nchịkọta ụlọ ahụ nwụsịrịBriana Epstein, ghọrọ onye ndu a na-edeghị aha nke ìgwè ahụ, ma, karịa nke ahụ, onye ya na-arụsi ọrụ ike. Abụ ọma ya kachasị mara mma nke oge Beatles gụnyereEleanor Rigby(1966),Enweghi ike ịzụta m ịhụnanya(1964),Ka Ọ Bụrụ(1970) na karịa ihe niileHey Jude(1968) aụnyaahụ(1965).
N'afọ1967Paul (nakwa ndị ọzọ so n'òtù ahụ) malitere ịmị ụtọọgwụ ọjọọna otu afọ mgbe e mesịrị, ìgwè ahụ dum na-agaIndiaịtụgharị uche ebe a. Na mgbakwunye na ọgwụ ọjọọ, Paul na ahụmahụ dị ka onye mbụ so na Beatles na egwu kọmputa na Ome onwen'okpurualaihe nkiri. N'okpuru nduzi Pọl, ọ na-apụta dị ka onye a katọrọ ma katọọ nghọtahie ọha na eze (ma ugbu a ka a ghọtara ya) ihe nkiri, BeatlesMystery Mechanism Njem, zurupsychedelicusoro ihe omuma na ihe omuma.
Paul ama ọfọn ye Eve Jane ke ediwak isua, edi ke isua oro1967zutereLinda Eastman,Americanonye na-ese foto. Na12. March 1969ha lụrụ di na nwunye, n'ihi ya, ha ruru ụbọchị asatọJohn LennonsYoko Ono. Paul ama ada ada Linda ke akpa ndọ Heather. Ya naLindanwere ụmụ atọ - Mary Annu,Stellu Ofna James Louise. Ndị di na nwunye ahụ na-ekwukarị na ma ụbọchị McCartney anọghị1980naJapaneseụlọ mkpọrọ (maka ihe onwunweMarihuany) na-enwe kwa ụbọchị ọnụ.
N'April1970Paul McCartney kwupụtara ọkwa n'ihu ọhaBeatlesahapụ (ọ bụ ezie na ìgwè adịghị de facto ugbua na 1969), na ndị ọzọ soro ụzọ ya na ndị nile so na-arụ na ha onwe ha oru. Paul ama ekpep n̄wan esieLinduna-egwu igodo ma na-etinye ya na ìgwè ọhụrụ yanku, malitere n'afọ1971. Ọrụ nkwonkwo mbụ bụ abụỤbọchị ọzọ. Ọ bụ ezie na ndị nkatọ Linda katọrọ ịbụ abụ na ịgba egwú,nkuenwetawo ọtụtụ onyinyeGrammyna v70. afọnwere nnọọ ihe ịga nke ọma.
McCartney n'oge egwunku, 1976
N'afọ1972kicks na otu maka njem mbu mgbeUnited Kingdomna otu afọ mgbe e mesịrịEurope. N'afọ1973bipụta Thenkueleghị anya gị kacha mmaalbum Band On The Run. McCartney enyewo ọtụtụ mmadụọcha, ma ọ bụ naanị ma ọ bụ otunku. Otu n'ime ndị a ma ama bụ ndị a kpọtụrụ aha n'eluRam,Venus na Marsma ọ bụTug nke Agha.
N'etiti80. afọkwadoroNchekwa Steviema ọ bụMichael Jackson. Ya na nwunye ya na-amalitendị na-eri anụna ndị na-agbapụta anụmanụ.
N'afọ1994Yoko Ono gafere ndị fọdụrụ na ndị Beatles Lennon ngosi, bụ nke ha na-edekọ abụ egwu. Ụzọ ikpeazụ nke ìgwè ahụ,Real ỊhụnanyakaFree dị ka Nnụnụ, wepụtara na albumsAnthology 1(Apple Records, 21 November 1995) naAnthology 2(Apple Records, 18, March 1996). AbụUgbu a, zubereAnthology 3(Apple Records, 28 October 1996) ezughị.
N'afọ1997McCartney ama ama ama, ndien enye ama enen̄ede ekere ke imọ idi kiet ke otu mbre music 20 ke otu, edi n̄kukụre ediwak n̄wed emi ẹkewotde. narị afọ.
N'afọ1998Nwunye nwunye ya nwụrụLindanacancerara. Otú ọ dị, na McCartney n'afọ2002ọ lụrụ nwanyị ọzọ maka oge nke abụọ ya na ihe nlereanya ahụHeather Millsna October2003nwa ha, Beatrice Milly McCartney, amuru ha. N'oge na-adịghị anya mgbe ahụ, Heather gbara alụkwaghịm.
Paul etinyewo onwe ya na egwu nke oge ochie, na-edepụta ọtụtụ ọrụ oge ochie (eg.Liverpool Oratoriumma ọ bụNkume Nkume). N'afọ1999e tinyere ya na Ụlọ Nzukọ Alaeze, na-asọpụrụ egwuLindanakwa ihe ngosi nke mbụ nke eserese ya.
Na6. June 2004, dị ka onye mbụ so n'ìgwè ahụBeatles, rụrụ na egwu naPrague.
Na20. února 2008ewerela onyinye a maka onyinye egwú ya n'imeBRIT Awards.
Na 2009 1 DVD + 2 CD, a na-ebizi egwu egwu nke a na-akpọ Good Evening New York City, ọtụtụ abalị na-agụnye ma Paula + Wings na Beatles.
9. October 2011vLondonnke ugboro atọ ọ lụrụ Nancy Shevell.
Ka ọ dịgodị, ọrụ egwú ikpeazụ ya bụ ihe ndekọKisses On The bottomnke afọ2012, bụ nke ọ na-enye ụtụ olu ndị kasị amasị ya site na 30. na 40. afọ ma tinye ya na 70. ụbọchị ọmụmụ.
Na12. December 2012ọ gara na egwu egwu bara uru121212, raara nye ndị ahụ metụtaraajọ ifufe, tinyere ndị sobu n'òtù ahụnirvana(ha zutere maka oge mbụ kemgbe nkwụsị nke afọ ahụ1994). Ha na-akpọ abụ a na-akpọ "Kpacha M ụfọdụ Slack". Ọ na-apụta na Sound City akwụkwọ ntụziaka nke ex-drummer NirvanaDave Grohl, nke a ga-ebido na February2013. Na 12. October 2013 wepụtara ọba ọhụụNewna aha egwu nke otu aha.
Sir James Paul McCartney, MBE (* 18. 1942 June Liverpool) bụ a British musician, na-agụ egwú na songwriter, mbụ so The Beatles.BiografiePaul McCartney mụrụ nne na nna nke Irish okpu (James McCartney na Mary Patricia Mohinová). Ọnụ ya na nwanne ya Michael (n'okpuru pseudonym Mike McGear mere onwe ya na egwú ntochi otu The Scaffold) ha we me ka elu na Catholic okwukwe. Mama m nwụrụ nke ọrịa ara ure mgbe Pọl 13 afọ. Na nwata, nna ya zụtara ya mbụ guitar na ya onwe ya dị ka n'oge gara egwuri opi na piano na a Jazz gbalaga, Paul nyere mbụ ihe nke music onwe ya. N'ụlọ akwụkwọ, ndị Liverpool Institute zutere George Harrison, na ọnụ, ha malitere ịmụta guitar (n'ihi ọchịchọ ịmata - Pọl-eme aka ekpe guitar urụk agbatị na mirror ejide n'olu ndị na-abụghị n'akụkụ).
John Lennon na Paul McCartney bụ otu n'ime ndị na-agụ egwú na-eme nke ọma n'akụkọ ihe mere eme nke egwú ndị a na-ewu ewu. Mmekọrịta na njedebe nke Partnership akwụsịla kemgbe Beatles malitere na 50. na 60. ụgbọ elu 20. narị afọ gara aga na njedebe nke ìgwè ahụ na 1970. Ọ dabeere na nkwekọrịta ọnụ ọnụ n'etiti ndị edemede abụọ ahụ, nke kwuru na ọ bụrụ na ha abụọ ma ọ bụ ha abụọ ga-abanye aka n'otu oge.
McCartney II bu akwukwo ihe omuma nke abuo nke onye na-egwu egwu na onye egwu egwu bu Paul McCartney. E wepụtara ya na 1980, otu afọ tupu mbibi nke Wings ya. Ihe ndekọ McCartney nke Abụọ dị iche na ọrụ McCartney gara aga, ebe o nwere ọkwa dị elu nke ndị na-emepụta ihe na ihe ndị dị egwu.
Linda Louise McCartney mụrụ Linda Louise Eastman (24. 1941 September New York - 17. 1998 April Tucson, Arizona) bụ ihe American-echebe, keyboardist, anụmanụ ikike mmume na nwunye Paul McCartney.
McCartney bụ akwụkwọ mpịakọta mbụ nke Paul McCartney nke 17 tọhapụrụ ya. April 1970 na United Kingdom. The akpali ihe banyere nke a album bụ na McCartney niile akwara na olu, ma e wezụga n'ihi na ụfọdụ na-akwado vocals site nwunye ya mbụ, Linda McCartney dere ya onwe ya. Dị ka okwu ya, McCartney egwuri na "bass, rụọ, guitar, now guitar, piano, mellotron, ngwa, xylophone na a ụmụ ụta na akụ." Ọzọkwa, ọ bụ na-akpali mmasị na-agụnye a nnukwu ego nke instrumental tracks.
James Louis McCartney (* 12. 1977 September London) bụ a British musician, andiwet na ọkpụ bi na London. Ọ bụ nanị nwa nwoke nke a dere na mbụ so beatles Paul McCartney na nwunye ya mbụ, na oké nkume-echebe na ụmụ anụmanụ ikike mmume Linda McCartney. Na 21. September 2010 James wepụtara ya mbụ album n'okpuru aha Dị Ìhè.
Ram bụ album nke Paul McCartney na Linda McCartney dere site n'aka 17. Ike 1971, nke a bụ naanị ọba egwu a ga-emetụta na nke a. Ọ bụ McCartney nke abụọ nke edemede abụọ, wepụtara n'etiti njedebe nke Beatles na Wings. E wezụga McCartney na ndị egwú ndị ọzọ, Wings Denny Seiwell bụkwa ihe ndekọ ahụ.
7: Band na ọsọ
Band on Run bụ Paul McCartney & Wings nke atọ studio album. Ihe ndekọ ya mere site na August ruo September 1973 na Lagos Lagos. Onye na-emepụta magazin bụ Paul McCartney, nke 1973 na Apple Records wepụtara na Disemba. Nke a bụ McCartney kacha ọhụrụ album wepụtara na nke a na-ebipụta ụlọ. Edere Rolling Stone album na 418. kesaa ebe obibi 500 gị na albums kachasị mma n'oge niile. Clive Arrowsmith bụ onye edemede nke foto ahụ na cover nke album ahụ, Paul na Linda McCartney, Denny Laine, Michael Parkinson, Kenny Lynch, James Coburn, Clement Freud, John Conteh na Christopher Lee.
Ihe omimi bu akwukwo album nke Paul McCartney, nke ogba n'okpuru aha nke Percy "Thrills" Thrillington. E wepụtara 29. April 1977 na United Kingdom na 17. Mee 1977 na USA. Nke a bụ ihe mkpuchi egwu nke Ram. A gbagburu album ahụ na 1971, ma McCartney kpebiri ịkwụsị ya n'ihi na n'oge ahụ, ya na nwunye ya bụ Linda, ọ tọrọ ntọala Wings. Na 1995 na 2004, e weghaara album ahụ na CD na 21. Mee ka 2012 bụrụ akụkụ nke mbipụta deluxe nke Ram.
9: Ndụ Owu
Mmiri ndụ bụ mbụ studio album nke Bekee Wings. A napụtara ya na December nke 1971 site na Apple Records na ndị na-emepụta ya bụ Paul McCartney na Linda McCartney. Edere ya na July na August na 1971 na London's Abbey Road Studios. Na chaatị America, Billboard 200 bụ iri nke iri na Chaatị nke Britain UK rue iri na otu. Na United States, ọ ghọọ platinum.
Red Rose Speedway bụ nke abụọ studio album nke Bekee Wings. E bipụtara ya n'April nke 1973 site n'aka Apple Records ma mepụta Paul McCartney. E dekọrọ ya n'oge 1972 na ụlọ ọrụ London dị iche iche (Abbey Road Studios, Olympic Studios, Morgan Studios, Trident Studios na Island Studio). Na chart America, Billboard 200 nọ na ala mbụ, mgbe na UK UK Albums Chart ọ bụ ise. Na mba abụọ ahụ, ihe edo edo ahụ ruru.
11: Njikọ ụda Liverpool
Liverpool Sound Collage bụ studio album nke onye na-akụ egwú Bekee, bụ Paul McCartney, wepụtara na 2000. Enwere ndekọ site na 1964, 1965, 1991 na 2000. Ọtụtụ akụkụ nke akwụkwọ akụkọ ahụ bụ ndị Beatles, onye ọzọ na-eto eto na-eto eto na Welsh rock band Super Furry Animals. McCartney na-arụkọ ọrụ na ìgwè na Rings gburugburu ụwa
12: Art nke McCartney
The Art of McCartney ụtụ ka musician Paul McCartney album, nke e wepụtara 18. November 2014. Ọ bụ a chịkọtara 42 songs si McCartney si solo ọrụ, na maka beatles, na-egwu nka ka Barry Gibb, Brian Wilson, Billy Joel, Bob Dylan, Willie Nelson, Alice Cooper, Smokey Robinson, Kiss na ndị ọzọ.
'04 Summer Tour bụ Paul McCartney si European tour, nke weere ọnọdụ na okpomọkụ nke 2004.Během a tour Paul McCartney mbụ gara nwekwara ndị Czech Republic, ya bụ 6. nke June. Ọ ghọrọ onye mbụ ex-so beatles, onye vystoupil.Záznam egwu na St. Petersburg e wepụtara na DVD Paul McCartney na Red Square na ndekọ nke egwu na Glastonbury ọzọ na DVD The Years.KapelaPaul McCartney McCartney - vocals, bass, guitar, klavírRusty Anderson - guitar, akwado zpěvBrian Ray - guitar, bass guitar, akwado zpěvPaul "Wix" Wickens - keyboards, accordion, guitar, harmonica, percussion, akwado zpěvAbe Laboriel Jr. - rụọ, percussion, akwado zpěvTermínyRepertoárJetGot Iji Nweta Ị n'ime My LifeFlaming PieAll My LovingLet Me Nyefee ItYou Ga-Lee A ntupu nke WomanMaybe m AmazedThe Long Ma asọfe RoadIn n'Agbanyeghị Of All The DangerBlackbirdWe pụrụ ịrụ ọrụ Ọ outhere TodayAll Ihe Ga Soro PassI'll na SunFor No OneCalico SkiesI've nnọọ Ahụla A FaceMichelle (ma e wezụga na Paris) Eleanor RigbyDrive Anyị CarPenny LaneGet BackBand na RunBack na USSRLive Ma Ka DieI've ọkọdọ A FeelingLady MadonnaHey JudeYesterdayFollow Me (naanị na Glastonbury) Ka Ọ bei hụrụ ya Dịwara ThereHelter SkelterSgt. Ose si Lonely Obi Club Band / The EndOdkazyReferenceV isiokwu a na-eji translation ihe odide nke isiokwu Paul McCartney 2004 Summer Tour na English Wikipedii.Externí njikọ
14: Venus na Mars
Venus na Mars bụ ihe nkiri studio nke ndị na-asụ Bekee. E wepụtara ya na Mee nke 1975 site na Capitol Records ma mee ya site n'aka Paul McCartney. Na American Billboard 200, nakwa na UK UK Albums Chart, album na-eru ebe mbụ. Na mba abụọ, ọ ghọrọ platinum.
15: Pịa ka igwu egwu
Pịa igwu egwu bụ otu onye na-egwu egwú bụ Paul McCartney. E wepụtara ya n'August nke 1986 site Parlophone (UK) na Capitol Records (USA), onye na-emepụta ya na McCartney Hugh Padgham. Na chart America, Billboard 200 nọ n'ọnọdụ iri atọ, ebe ọ bụ na UK Albums Chart na asatọ. Na United Kingdom, ọ ruru otu efere ọlaedo.
London Town bụ ihe nkiri studio nke ndị na-asụ Bekee. E wepụtara ya na March nke 1978 site na Parlophone na Capitol Records ma mepụta Paul McCartney. E dekọrọ na February 1977 na Jenụwarị 1978 n'ọmụmụ ihe dị iche iche, gụnyere Abbey Road Studios na AIR Studios. Akara ndepụta nke UK UK bụ nke anọ, ebe Billboard 200 ruru nke abụọ.
17: Mmiri na USSR
Snova v SSSR (Russian: Sova na USSR) bụ nke asaa studio album nke onye ọbụ abụ na onye egwú bụ Paul McCartney. E bipụtara ya na 1988 nanị mgbe ahụ Soviet Union. Mpịakọta ahụ nwere nanị ihe mkpuchi nke nkume a ma ama na nchịkọta mpịakọta 20. narị afọ. Na 1991, mgbe ọdịda nke USSR gasịrị, a tọhapụrụ album ahụ na ụwa na mgbakwunye otu usoro egwu.
18: Na-agba ọsọ ọsọ ọsọ
Egwuregwu na Speed ​​of Sound bụ ihe nkiri studio nke ndị na-asụ Bekee. E wepụtara ya na March nke 1976 site na Capitol Records. E dere ya site na January na February n'afọ ahụ na Abbey Road Studios na London ma mepụta ya site na Paul McCartney. Na sụgharịrị UK, Akwụkwọ Ọrụ Album nke UK bụ nke abụọ, ebe American Billboard 200 bụ nke mbụ. Na United States, ọ ghọọ platinum.
Stella Nina McCartney Willis, OBE (přechýleně McCartney Willis; 13. 1971 September na London) bụ a British emepụta ejiji na-ada Paul McCartney McCartneyho.BiografieStella-arụ ọrụ maka ama ụdị (Chloe, Gucci, Adidas, Karl Lagerfeld) mere ekike n'ihi na Madonna, Annie Lennox, Gwyneth Paltrow. O meriri ọtụtụ enọ.
20: Wings (otu egwu)
Wings bụ otu ìgwè dị egwu nke Beatles Paul McCartney hiwere n'April nke 1971. Egwu emeela nnukwu ihe ịga nke ọma na 70. afọ na mmalite nke 80. afọ, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ndị ọrụ nchịkọta nke ìgwè ahụ na-agbanwe mgbe niile.
21: Okooko osisi na Dirt
Okooko osisi na unyi bụ nke asatọ solo studio album site Paul McCartney, wepụtara na 1989. The album ntọhapụ a na-enwekarị tour of The Paul McCartney World Tour.Seznam skladebObsazení Paul McCartney - vocals, now guitar, electric guitar, bass guitar, iri na abua-eriri guitar, Mexico guitar, piano, synthesizers, rụọ, egwú otiti, percussion, celeste, sitar, harmonium, akwado vocals, mellotron, percussion, violin, keyboards, iku aka
22: Tug nke Agha
Tug of War bụ nke atọ solo studio album site British egwú rock na mbụ so beatles Paul McCartney. Ọ bụ n'ihu nke gara aga album McCartney II of 1980 na ya mbụ ukara album, gbakọọ si disintegration ya otu Nku na April 1981. N'ihi na ndekọ nke album McCartney nyere oge azụ ọnụ na music na-emeputa George Martin. Tug of War bụkwa mbụ McCartney album, wepụtara mgbe ọnwụ nke John Lennon, mbụ ya andikabuana teammate nke beatles.
23: Nchekwa oge kachasị
Memory Almost Full bụ iri na anọ studio album site Paul McCartney. Na United Alaeze ya e nyere 4. June 2007 na United States na ụbọchị později.Seznam skladebAutorem niile songs site Paul McCartney. "Dance Tonight" - 2: 54 "Ever Ugbu n'Oge Gara Aga" - 2: 57 "Lee gị Sunshine" - 3: 20 "Naanị Mama" Maara - 4: 17 "Ị Gwa Me" - 3: 15 "Mr. Bellamy "- 3: 39" Obi ụtọ i nwere "- 3: 19" Vintage Uwe "- 2: 22" Nke ahụ bụ Me "- 2: 38" Ụkwụ na ígwé ojii "- 3: 24 'House of Wax' - 4: 59" The End of Ọgwụgwụ "- 2: 57" ikwe Your Head "- 1: 58Reference
24: Na Na Na (song)
"Ka Ọ Bụrụ" bụ The Beatles site na John Lennon na Paul McCartney na 1970, McCartney na-abụ abụ nanị. Ọ bụkwa abụ ikpeazụ tupu Paul McCartney kọrọ ịhapụ ìgwè ahụ.
25: Laa azụ n'ụwa
Back na World tour bụ Paul McCartney European tour, nke weere ọnọdụ na opupu ihe ubi nke 2003.Po mbụ 6 egwuri concerts (1 na Paris, Barcelona 2, 2 na 1 na Antwerp na Sheffield) McCartney ejide ndị flu na nwere ndị na-esonụ ụbọchị na Sheffield aga ruo na njedebe nke njem ahụ. N'ihi ọrịa mgbe ọ na-aghaghị-agbanwe ugboro abụọ olu.
New bụ Paula McCartney nke iri na isii studio album site na onye na-akụ egwú Bekee. E bipụtara ya na 14. October, 2013, akara egwu Virgin Virginie EMI Records, na album mbụ nke McCartney, nwere ọhụụ ọhụrụ ebe ọ bụ na 2007, mgbe a tọhapụrụ Ncheta Uche zuru ezu. E nwere abụ iri na abụọ na album ahụ, ya na ndị ọrụ anọ: Mark Ronson, Ethan Johns, Paul Epworth na Giles Martin. N'akwụkwọ Album Album nke UK, ọ bụ nke atọ ka album ahụ dị; enwere otu ntinye aka na Billboard 200.
27: Laghachi azụ
Ịla azụ na Egg bụ ihe ọhụrụ studio album nke Bekee. Weghaara na 24. Ka 1979 site na Columbia Records na USA, Parlophone wepụtara ya na United Kingdom izu abụọ ka e mesịrị. E dekọrọ n'oge dị iche iche site na June 1978 ruo February 1979 n'ọmụmụ ihe dị iche iche, gụnyere Abbey Road Studios. Billboard 200 bụ nke asatọ dị na chaatị ndị Amerịka, ebe British Album Album Chart bụ nke isii. Na United States, ọ ghọọ platinum.
28: Gbaa ọsọ ọsọ
Run Run Run bụ album studio nke onye egwu egwu bụ Paul McCartney. E wepụtara ya na October nke 1999 site na Parlophone na onye na-emepụta ya na McCartney Chris Thomas. E dere ya site na March ruo May nke afọ ahụ na Abbey Road Studios. Abụọ nwere ọtụtụ ihe mkpuchi nke egwu site n'afọ ndị 1950, ma McCartney atọ sitere na ụdị abụ ndị ọzọ. Na Billboard 200, e debere album ahụ na 27. ebe.
29: Achịcha ọkụ
Achịcha na-egbuke egbuke bụ ihe ndị a na-akpọ egwú studio na-agụ egwú bụ Paul McCartney. E wepụtara ya na May nke 1997 site Parlophone na Capitol Records, nke McCartney Jeff Lynne na George Martin bipụtara. Edekọla abụ abụọ n'ime album ahụ na 1992, ndị fọdụrụ na 1995 ka 1997. E dekọrọ n'ọmụmụ ihe ndị ọzọ, gụnyere Abbey Road Studios. Dịka ọmụmaatụ, abụ a na-eji abụ "Jiri Eme Ihe Ọjọọ" bụ otu duet na Steve Miller. N'akwụkwọ Bing nke Akwụkwọ Album Album nke UK, nakwa na US Billboard 200, album ahụ dị n'ala nke abụọ. N'ala abụọ ahụ ọ ghọrọ ọla edo.
30: Ọgba aghara na okike na azụ
Chaos na Creation na Backyard bụ onye na-agụ egwú Bekee bụ Paul McCartney. E wepụtara ya na 2005 na September site na Parlophone na Capitol Records. Onye na-emepụta ya bụ Nigel Godrich. Ejiri ndepụta nke UK na UK nke isii na US Billboard 200 na isii. Ná mba ụfọdụ, ọ meriri otu efere ọlaedo.
Ụnyaahụ (na Czech translation ụnyaahụ) bụ a song si òtù egwú beatles nke 1965 si album Help! .Ačkoli song na-eze otoro Lennon / McCartney dere ya niile naanị Paul McCartney. The song bụ na-ewu ewu ọbụna taa si dị nakwa dị ka Guinness World Records bụ song nke nke bụ ihe mere eme nke na-ewu ewu music kasị dere cover nsụgharị. Ọ na-amasị ha 3000 Album Help! Ọ ẹkenịmde ọnwa atọ mgbe ya ntọhapụ na n'elu iri nke British chaatị dị iche iche. The ụlọ ọrụ Broadcast Music Incorporated (Ọtụtụ BMI) na-ekwu na naanị na 20. na narị afọ song e aired na media karịa sedmmiliónkrát.
32: Mmiri mmiri ozuzo
Mmiri na-akwọ ụgbọala bụ ihe a na-akpọ egwú studio na-agụ egwú bụ Paul McCartney. E wepụtara ya na November site na 2001 site na Parlophone. E dere ya site na February ruo June nke afọ ahụ na Henson Recording Studio na Los Angeles, nke David Kahne mepụtara. E debere Billboard 200 na 26 na sụgharịa US. ebe, na UK UK Albums Chart na 46.
33: Machi Mystery Tour (ihe nkiri)
Kpokọtara Mystery Tour bụ a British film gwara site na egwu si mpụta mbụ The Beatles.DějKdo ịghọta akụkọ na film: Nyere!, Ọ siri ike nghọta ọbụna n'ihi nke a film. Òtù nke gbalaga na nkiri na-akpọ njem ụgbọ ala, nke na-aga na-agaghị echefu echefu na-eme njem ebe ọ bụla - na mberede. A na-ese vidio ahụ na obere ihe Beatles na ụdị ihe ọchị Bekee.
Heather Mills McCartney (* 12, January 1968, Alderhot, United Kingdom) bụ ihe atụ nke Britain, onye ọrụ nchekwa ụmụ mmadụ na Paul McCartney nke abụọ nwunye. Heather enweghi ihe omimi na nwata, ya na mama ya laghachi na nwata, o gbapuola n'ulo ya ma biri "n'okporo ámá" ruo otutu ọnwa. O nwere ọrụ ụfọdụ ruo mgbe ọ ghọrọ ihe nlereanya. Mgbe ọ dị afọ iri na itoolu, ọ gbara ọtụtụ ihe ọkụkụ.
"Eleanor Rigby" bụ a song nke British otu beatles, onye chepụtara na-otoro na Lennon / McCartney, n'agbanyeghị na o dere ya onwe ya Paul McCartney. N'August, a tọhapụrụ 1966 na mpaghara abụọ A na "Submarine Yellow". O weputara Revolver n'otu oge ahụ. The song e mesịrị dere ọtụtụ ndị ọzọ na-ese ihe, gụnyere Vanilla Fudge, chick Corea na Al Di Meola. A na-akpọ abụ a mgbe ọ bụ ezigbo mmadụ. Eleanor Rigby na-eli ya n'ebe a na-eli ozu na St. Petra na Woolton.
36: Na-ehicha na ala
Ntughari na ala bụ Paula McCartney 15th studio album studio, nke 7 wepụtara. February 2012. A na-enweta album ahụ na CD ma LPs. O nwere ngụkọta nke mkpuchi iri na abụọ na abụ abụọ mbụ. Dịka ọmụmaatụ, Stevie Wonder, Eric Clapton, Bucky Pizzarelli na Diana Krall, onye na-emepụta Tommy LiPuma.
37: Ụkụ nke Udo
Uche nke Udo bu akwukwo omuma ohuru nke onye na-egwu Bekee Paul McCartney. E wepụtara ya na October nke 1983 site Parlophone (UK) na Columbia Records (USA). Edere na 1980 site na 1983 na July, a tọhapụrụ 200 na onye mmepụta George Martin. Enwere ugbua abuo na Michael Jackson n'elu album: "Say Say Say" na "Nwoke". Na mpịakọta US Billboard XNUMX, e debere akwụkwọ ahụ na ebe iri na ise, na UK UK Albums Chart na nke anọ. N'ọtụtụ mba, ọ ghọọ platinum.
38: Gbanyụọ ala
N'elu ala bu akwukwo ogwu nke onye na-egwu Bekee Paul McCartney. A tọhapụrụ na February nke 1993 site Parlophone (UK) na Capitol Records (USA). Mụ na McCartney mere Julian Mendelsohn. Billboard 200 kụrụ ebe iri na asaa na chaatị ndị United States, ka akwụkwọ ozi ndị Britain UK Album nke ise.
39: Alaeze nke Ocean
Alaeze nke Ocean bu akwukwo ihe omimi nke ise na ballet nke mbụ nke Paul McCartney. Ọ bụ egwu maka ịme ballet nke otu aha ahụ. A tọhapụrụ album ahụ na October na 2011. Ndepụta nke ihe ndị e dere na Paul McCartney dere egwu niile.
40: M hụrụ ya n'anya
M na-ahụ n'anya bụ abụ e dere na 1964 site n'aka Paul McCartney maka nwa-nwanyi-nwanyị Jane Asher. O sina dị, ụzọ otoro Lennon / McCartney.Skladbu mbụ Beatles dere na wepụtara na ya album A Ike Day si Night. Kemgbe ahụ na e nwere ọtụtụ nke ya coververzí.NástrojePaul McCartney: vocals, baskytaraJohn Lennon: now kytaraGeorge Harrison: now guitar, sounding dřívkaRingo Starr kongaReference
41: Site n'enyemaka Ntanetị site n'aka ndị enyi m
"Site n'enyemaka Ntanetị site n'aka ndị enyi m" bụ abụ nke abụọ site na album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band si 1967 sitere na ndị agha British The Beatles. Lennon / McCartney (John Lennon, Paul McCartney) dere abụ ahụ. Na 2004, magazin Rolling Stone gụnyere 311 na listi 500 ha kacha mma na oge niile. Dịka ọmụmaatụ, Joe Cocker mere abụ ahụ ma wepụta ya na album 1969 "Site n'enyemaka Ntanetị n'aka Ndị Enyi".
42: Ụzọ Abbey
Ụzọ Abbey bụ akwụkwọ nke iri na otu nke album Beatles. A na-edekọ album ikpeazụ nke The Beatles, Let It Be, nke a tọhapụrụ na Abbey Road, edere ya n'ihu ya. Okporo ụzọ Abbey bụkwa ihe ndekọ ụlọ ikpeazụ nke ìgwè ahụ.
Sir (English [sɜː] IPA, czech [sir] [isi iyi?]) Ọ bụ onye na-agwa mmadụ okwu na-agwa okwu n'asụsụ ndị na-asụ Bekee. A na-ejikarị eme ihe maka onye uweojii, dịka ọmụmaatụ, na ngalaba ndị agha na ndị uweojii. Na Britain na ụfọdụ mba ndị Commonwealth, a na-eji ndị uwe ojii ma ọ bụ baronet ejikọta ya na aha dị ka aha ma ọ bụ aha ndị na-eburu aha aha ọma. E jiri ya na aha mbụ ma ọ bụ aha zuru ezu, a naghị eji ya na aha nna ya (dịka ọmụmaatụ Sir Paul McCartney nwere ike ịkpọ "Sir Paul" ma ọ bụghị "Sir McCartney"). Enweghi ike igosi aha Sir nani na o kwesiri ya, kamakwa ketara ya, adreesị nwanyi adighi abughi ihe kwesiri ya, ya mere, iji aha ya eme ihe n'amaghi oke.
44: Biko Biko Biko
Biko Biko M bụ Beatles album nke 22 wepụtara. March 1963 dị ka ọsọ ọsọ maka ọganihu nke ụmụ nwoke Biko Biko Me A Love Me Do. N'ime abụ iri na anọ na album ahụ, di na nwunye bụ John Lennon / Paul McCartney dere asatọ.
45: Kwa Ụbọchị
Ụbọchị Nri siri ike (abalị siri ike) bụ ihe nkiri ndị nkiri Britain nke dabeere na edemede nke Aluna Owen na 1964. A na-enye ihe nkiri BAFTA ka ọ bụrụ ihe nkiri kachasị mma na ụdị egwu / egwu egwuregwu 1964.
46: Beatles maka ire
Beatles maka Sale bụ nke anọ Beatles wepụtara na njedebe nke 1964. Ọ bụ Parlophone bipụtara ya na onye na-emepụta ya bụ George Martin. Akwukwo a abughi egwu a ma ama dika Ubochi ato na Izu ma obu abughi m.
47: Submarine Yellow (song)
"Submarine Yellow" bụ abụ ndị ụsụụ ndị Britel na-akpọ Beatles, bụ onye a na-akpọ Lennon / McCartney onye edemede ya, ọ bụ ezie na Paul McCartney dere ya n'onwe ya. N'August, 1966 bịara na abụọ A-n'akụkụ otu na "Eleanor Rigby". N'otu oge ahụ, ọ pụtara na album Revolver na afọ abụọ mgbe e mesịrị n'otu aha na ụda aha otu aha ahụ. Ndị mbụ na-alụ di na mbụ na sụgharịrị UK ma were izu anọ ka ha wepụ "Ihe niile maọbụ ihe ọ bụla" site na obere ụzọ. N'ebe dị iche iche, ọbụ abụ na-ewe izu iri na atọ.
48: Na-ebi ndụ ma nwụọ
"Nwee Ndụ na Ka Nwunye" bụ ụzọ ndu nke ihe nkiri ahụ na Live ma nwụọ site na usoro James Bond. Odere Paul na Linda McCartney maka Wings. Ọ bụ otu n'ime egwu ha kachasị ama, na-eru 2. ebe dị na Billboard American Hot 100 na 9. ebe dị na UK UK Singles Chart.
49: Ebe dị n'England
Otu n'ime England bụ akwụkwọ mpịakọta nke asatọ nke George Harrison, nke e wepụtara na 1981 na Dark Horse Records. E dekọrọ ya na October 1979 na February 1981 na onye mmepụta Harrison na Ray Cooper. A raara abụ "All Those Years Ago" ka ọ bụrụ ihe ncheta nke oge John Lennon, ndị otu n'ime Beatles, Paul McCartney na Ringo Starr na-egwuri egwu.